ktmkhabar.com - गर्मी मौसमा फ्रिजको पानी पिउनु कत्तीको उचित ?
गर्मी मौसमा फ्रिजको पानी पिउनु कत्तीको उचित ?
बिहिबार, चैत्र २४ २०७८
गर्मीले औडाहा भएपछि चिसो पेय वा फ्रिजको पानी पिउनु सामान्य कुरा हो । फ्रिजमा चिसो पारिएको पानीले तत्काल हामीलाई आनन्द आउँछ । तर यसरी पिएको पानी नै हाम्रालागि कालान्तरमा स्वास्थ्य समस्याको कारण बन्न सक्छ । के के छ त फ्रिजको चिसो पानी पिउनुको हानी भन्ने विषयमा आज हामी चर्चा गर्दै छौ ।
१. चिसो पानी पिउँदा श्वासनलीमा कफ बन्न जान्छ । श्वासनलीको सुरक्षार्थ हुने पत्रमा कफ जम्मा हुँदै जाँदा विभिन्न संक्रमण हुन पुग्छ । यसले घाँटी खराब हुने खतरा बढाउँछ ।
२. मानव शरीरको सामान्य तापक्रम ३७ डिग्री सेल्सियस हुन्छ । जब कुनै चिसो चिज पिइन्छ तब त्यसलाई सामान्य तापक्रममा बदल्न शरीरको ऊर्जा खर्च हुन्छ । खाएको पदार्थ पचाउन र पोषक तत्व शोषणका लागि प्रयोग हुनुपर्ने ऊर्जा अन्यत्र खर्च हुँदा शरीरलाई पोषक तत्व प्राप्त हुन सक्दैन ।
३.बरफ वा चिसो पानी पिउँदा मुटुको गति कम हुने खतरा पनि रहन्छ । चिसो पानीले ‘भेगस नर्भ’ उत्तेजित पार्छ । भेगस नर्भको काम शरीरको पराधीन कामलाई नियन्त्रित गर्नु हो । यसले मुटुको गति कम गर्न मध्यस्थता गर्छ । चिसो पानीले भेगस नर्भ उत्तेजित पारेपछि मुटुको गति कम हुन थाल्छ ।
४.फ्रिजमा राखिएको अत्यधिक चिसो पानी पिउँदा पाचन प्रक्रियामै बाधा उत्पन्न हुन्छ । चिसो पानीले रक्तबाहिनी नली खुम्चिन पुग्छ । यसले पाचन पक्रिया गति सुस्त बनाउँछ । खाएको कुरा ठीक तरिकाले पाचन भएन भने खानामा भएका पोषक तत्व शरीरले पाउँदैन ।
चिसो पेयफ्रिजको पानी
तपाईले सपनामा सर्प देख्नुहुन्छ ? जीवनमा हुन्छ यी ६ परिवर्तन !
धेरै धनसम्पति कमाउने चाहाना छ ? पर्समा यी ५ चमत्कारी चीज राख्नुहोस्
बिहानीको समयमा यस्ता क्रियाकलाप गर्नाले जीवनकालमा कहिल्यै पैसाको कमी हुने छैन
तपाईँलाई छिटो-छिटो पिसाब लाग्ने समस्या छ ? छ भने यो रोगको लक्षण हुनसक्छ !
गर्भवती महिलालाई किन लाग्छ ‘वाकवाकी’ ?
यसरी बढाउन सकिन्छ सम्भोग शक्ति (विधिसहित)